News 18 Nepal || कहिले हुँदैछ ‘कमेडी च्याम्पियन २’ को फाइनल ? को बन्ला विजेता ?
काठमाडौं । कमेडी रियालिटी शोहरुले मानिसलाई तनावुमक्त गराउने औषधीका रुपमा काम गरिरहेका छन् । विभिन्न घटना र परिस्थितिमा रुमलिएका मानिसहरुलाई यसले केही समयका लागि भएपनि रिफ्रेस गराउँछ ।
नेपालमा पनि कमेडी रियालिटी ‘कमेडी च्याम्पियन’ शुरु भयो । हाल यसको दोस्रो सिजन जारी छ । दोस्रो सिजन पनि अन्तिम चरणतिर छ । ३ जना कमेडीयनले फाइनलमा स्थान बनाइसकेका छन् ।
फाइनलमा भरतमणि पौडेल, विक्की अग्रवाल र सन्तोष थापा पुगेका छन् । अब तीनबाट एक उत्कृष्ट छानिनेछन् । भरतमणि शोको फाइनलमा पूर्व युवराज शाहको नक्कल गर्दै ‘पफमर अफ द राउण्ड’ भएर पुगेका थिए भने विक्की र सन्तोषलाई दर्शकको भोटले सुरक्षित गरेको थियो ।
प्रतियोगिताको फाइनल आगामी असोज २ गते लाइभ आयोजना हुनेछ । त्यस अगाडि तीनै प्रतियोगी आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न भोटिङ अपिल गरिरहेका छन् । तीन प्रतियोगी मध्ये भरतमणि ताप्लेजुङका हुन् भने सन्तोष गोर्खाबाट सहभागी भएका हुन् । विक्की भने सिक्किमबाट आएका हुन् । तीनै जनाको प्रस्तुति दमदार रहेको छ ।
एमसीसीको विषयमा यसो भन्छन् राजेश हमाल र करिश्मा मानन्धर
को बन्ला ‘कमेडी च्याम्पियन २’ को विजेता ? यस्तो छ मनोज गजुरेलको विश्लेषण